iBafana Bafana Archives - Impempe
Category: iBafana Bafana
UBartlett ugxeka ubuholi beSafa ‘obungalisizi ibhola laseMzansi’
May 24, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane Umqeqeshi weCape Town Spurs, uShaun Bartlett, uthi sesifikile isikhathi sokuthi kuphathe omunye wabo kwiSouth African Football Association (Safa), oyinkakha elidlalile ibhola. “Sekuphele iminyaka engu-30 yonke kodwa alukho ushintsho ebholeni lakuleli,” kusho uBartlett. “Kunalokho sekushintshwe […]
Leave a commentiBafana Bafana
UNomvete uthi akulandelwe isibonelo seCameroon ngabazophatha ibhola
May 12, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane USiyabonga Nomvete owayeyisibabuli somgadli kwiBafana Bafana ukholwa wukuthi ukuqokwa kukaSamuel Eto’o abe ngumengameli weCameroon Football Federation yisibonelo esihle okumele silandelwe nangamanye amazwe. U-Eto’o uqokelwe kulesi sikhundla ngoDIsemba nyakenye kanti sekunconywe kaniningi ezinhlakeni ezehlukene […]
Leave a commentEzakamuva, iBafana Bafana, Ibhola lomhlaba, iDStv PremiershipBafana Bafana, Lucas Radebe, Nomvete, Safa
UMlambo ushiye iSABC wabuyela kwiSuperSport
April 8, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi Kuphelile ukuqagela ngekusasa lomunye wabethuli bezinhlelo zezemidlalo abaphambili kuleli uThomas Mlambo ngesikhathi iSuperSport imemezela ukuthi ‘ubuyela ekhaya’ ngoLwesihlanu. Lokhu kuqagela bekuqale ngemuva kokuthi iSABC, abesebenza kuyo kule minyaka embalwa edlule, imemezele ukuthi useyishiyile […]
Leave a commentEzakamuva, iBafana Bafana, iDStv Premiership, iGladAfrica Championship
UZongo ukhala ngendavundavu yebhola kwiPSL, akayiphathi ke eyeChiefs
April 6, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi UMasibusaze Zongo owayengumdlali weSuperSport United nePlatinum Stars uthi usenqena ngisho ukuyibuka imidlalo yeDStv Premiership ngenxa yokuthi ibhola elidlalwa kuyo liwumbozo wodwa. UZongo, owayedlisa ngomjiko omangalisayo, kumanje akanaqembu kulandela ukuhlukana kwakhe neBizana Pondo Chiefs […]
UMbappe ukhombise unya enqumela iBafana ogodweni
March 29, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi Bekungathi unenxa neBafana Bafana uKylian Mbappe ngendlela abezimisele ngayo ngokunqumela iBafana Bafana ogodweni emdlalweni wesihle neFrance ngoLwesibili kusihlwa. UMbappe bekungathi imnukela kabi iBafana njengoba kunguye obelwa cishe kunabo bonke abadlai beFrance, ewafuna la […]
Leave a commentEzakamuva, iBafana Bafana, Ibhola lomhlaba